Ajụjụ isii ị ga-ajụ onwe gị tupu ịmalite imewe weebụsaịtị gị | Martech Zone
Ajụjụ isii ịjụ onwe gị tupu ịmalite imewe weebụsaịtị gị
Mọnde, Jenụwarị 11, 2016 Tuesday, January 12, 2016 Pamela Webber
Iwulite webusaiti nwere ike buru oru siri ike, mana oburu n’iche banyere ya dika ohere ighazighari ahia gi ma mee ka onyogho gi puta, i gha amuta otutu ihe banyere ika gi, ma nwekwa obi uto ime ya.
Ka ịmalite, ndepụta nke ajụjụ a kwesịrị inyere gị aka ịdọrọ gị n'ụzọ ziri ezi.
Kedu ihe ị chọrọ ka weebụsaịtị gị mezuo?
Nke a bụ ajụjụ kachasị mkpa ị ga-aza tupu ịmalite njem a.
Chee echiche banyere "nnukwu foto" ahụ. Kedu ihe atọ kachasị mkpa ịchọrọ ma ọ bụ chọrọ site na weebụsaịtị gị? (Ntuziaka: can nwere ike iji ndepụta a nyere gị aka ịchọta azịza ya!)
You bụ ụlọ ahịa brik-ngwa-ngwa mkpa iji nye ozi gbasara ọnọdụ gị na ihe ị nwere na ngwaahịa? Ma ọ bụ, ịkwesịrị inyere ndị ahịa aka ịmegharị ngwa ngwa, ịzụ ahịa, na ịzụta na saịtị gị? Ndị ahịa gị ọ na-achọ ọdịnaya dị egwu? Na, ha ga-achọ ịdebanye aha akwụkwọ akụkọ e-akwụkwọ maka ọdịnaya ndị ọzọ?
Detuo mkpa gi niile na akwukwo ma dozie ha. Mgbe ahụ, ịnwere ike iji ndepụta a mgbe ị na-enyocha ndị na-eweta weebụsaịtị, ndị nrụpụta, na ndị mmepe.
Aka ekpe gaa aka nri: Otu saịtị dị mkpa na-ekwupụta ihe ndị dị mkpa, saịtị Ecommerce na-enye gị ohere ịre ntanetị, na blọọgụ na-enye gị ohere ịkekọrịta ọdịnaya na echiche.
Ego ole ka ị nwere ike imefu?
Tụlee mmefu ego gị ma nyochaa ihe niile ị ga-akwụ tupu iwere ya. Hụ na gị na ndị otu niile na - arụkọ ọrụ ọnụ iji mebie ndepụta mmefu. O nwere ike ịbụ na mmefu ego gị na-emere gị ọtụtụ mkpebi.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ego siri ike, ndepụta kachasị mkpa gị ga-enyere gị aka ikpebi ihe kwesịrị ibute ụzọ. You ga-achọ peeji ọdịda dị mfe, ma ọ bụ saịtị zuru ezu? Y’oburu n’inwe ihe omuma banyere ihe omuma ma ichoghi ichikota, otu peeji nke edere na ndebiri nwere ike ime ka ihe ruru $ 100 / afo. Ọ bụrụ n'ịchọrọ imepụta ma zụlite ngwa weebụ zuru oke yana atụmatụ azụmaahịa ọdịnala, ị nwere ike ị na-akwụ ihe karịrị $ 100 / awa maka ọrụ nwere ike iwe ọtụtụ narị awa.
Oge ole ka i nwere?
Dịka iwu zuru oke, oge dị mkpirikpi maka iwu weebụsaịtị, obere oge. Ya mere ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị dị mgbagwoju anya-yabụ ọ bụrụ na ọ nwere ọtụtụ peeji dị iche iche na-akpọsa ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ-ị ga-achọ ijide n'aka ịtọlite ​​usoro igba egbe nwere ezi uche iji zere ụgwọ dị elu na-enweghị isi.
Nke ahụ kwuru, iwulite weebụsaịtị agaghị ewepụ ruo mgbe ebighi ebi. Ka anyị kwuo na ị nwere izu ole na ole: You nwere ike ịhọrọ maka prebuilt template sitere na WordPress ma ọ bụ ikpo okwu ọzọ. Enwere ike ịtọlite ​​blọọgụ dị mfe, mara mma ngwa ngwa, ị nwedịrị ike ịgụnye omenala ole na ole, kwa.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ oge wepụta webụsaịtị gị na otu ụbọchị ma ọ bụ ihe omume akọwapụtara, gbaa mbọ hụ na ị kwenyere n’ihu ya. Nwere ike ịhapụ ụfọdụ arụmọrụ na nkwụghachi maka ọsọ.
You nwere akara doro anya?
Ebe nrụọrụ weebụ gị kwesịrị igosipụta akara ngosi gị nke ọma ka ndị ahịa mara ma cheta gị. Ihe a doro anya bụ ihe dị mkpa iji wulite ika gị maka ọganiihu ogologo oge. Ihe ndị dị ka akara ngosi gị, onyonyo ndị eji isi mee, ụdị nri, palettes agba, ndebanye aha, onyonyo, na ọdịnaya niile na-enye aka na akara ngosi gị, ma kwesiri ịdị na-agbanwe agbanwe.
Y’oburu n’itinyebeghi aka na onye mmebe ihe nlere na aka gi, mee ntaneti nke ntaneti nke ihe omuma di nma banyere nke ichotara. You'll ga-ahụ etu websaịtị siri dị ma nwekwaa mmetụta dị iche iche na weebụ maka ụcha ụlọ ọrụ, akara ngosi ya na nhọrọ anya ya. Jide n'aka dokwuo anya ile anya ụlọ ọrụ gị na mmetụta dị gị n'uche iji nyere aka duzie nhọrọ imepụta weebụsaịtị gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka, 99designs na-enye ọrụ n'ụdị asọmpi imepụta nke nwere ike inyere gị aka inyocha ụdị dị iche iche "anya na mmetụta", na-amalite site na akara ngosi gị.
Kedu ọdịnaya m chọrọ?
Igbu oge na ihe e kere eke nwere ike ime ka mgbasa ozi webụsaịtị laghachi azụ. Onye mmebe weebụ gị ma ọ bụ onye nrụpụta agaghị ede akwụkwọ gị, họrọ foto pọtụfoliyo gị, ma ọ bụ tinye akaebe vidiyo gị. Mee ndepụta na mbido niile ọdịnaya ị ga - achọ ịchịkọta (ma ọ bụ mepụta), yana usoro usoro iheomume na usoro iheomume siri ike. Nke a kwa kwesiri ikwekọ na ụdị ika gị na mkpa ndị na-ege gị ntị. Iji maa atụ, ọ bụrụ na ịre uwe ụmụaka, ọdịnaya gị kwesịrị ịgwa nne, nna, na ikekwe nne nne. Na, foto gi kwesiri igosi onyonyo nke umuaka umuaka ndi mara mma n’ime uwe gi.
Kedu ihe ị hụrụ n'anya - ma kpọọ asị?
Rịba ama usoro niile na ihe ngosi na ndozi ị ga-achọ ịchọpụta ma zere, ma nwee atụ nke weebụsaịtị ị hụrụ n'anya n'aka (yana nkọwa maka ihe kpatara ị ji hụ ha n'anya). Gbalịa ọchụchọ dịka "nhazi weebụ" na Pinterest ka ịmalite. A doro anya set nke-eme na don'ts ga-eme ka imewe usoro nnọọ mfe, na ịtọgbọ mmasị gị tupu oge eruo nwere ike ịzọpụta gị tọn isi isi ọwụwa na-enweghị isi n'okporo ụzọ.
Pinterest search maka egwu web imewe.
Tags: brandmmefu egoatụmatụna-eme atụmatụ na ebe nrụọrụ weebụoge mgbochimmebe mmebe weebụatụmatụ weebụsaịtịihe mgbaru ọsọ na ebe nrụọrụ weebụwebsaịtị mmụọ nsọatụmatụ weebụsaịtị
Pamela Webber bụ Chief Marketing Officer na 99designs, ụlọ ahịa ahịa ihe osise kacha ibu n'ịntanetị. Na 99designs, Pamela na-ahụ maka otu ahịa azụmaahịa zuru ụwa ọnụ maka ịchụpụ nnweta ndị ahịa yana ịbawanye uru nke ndị ahịa. Na mgbakwunye na ahụmịhe ya dị ka onye na-azụ ahịa, Pamela na-eweta ọtụtụ ahụmịhe mbụ dịka onye ọchụnta ego ecommerce ma na-arụ ọrụ na mmalite mbido ngwa ngwa.
Ego Ole Ka Infographics Na-efu? (Na otu esi echekwa $ 1000)